Nezvedu - Yiwu Shunshui Ltd.
Glovehat.com by SS (YIWU SHUN SHUI LTD) ndiye mutungamiri mune yechando zvishongedzo zvemhuri yese. Isu tiri kambani yakachengetwa yega inopa vakawanda vatengesi vezvinodhaka nevekutengesa zvinhu muUS neEurope zvichingodaro.
Kubudirira kwedu kunogona kuverengerwa chokwadi chekuti isu tinopa kukwikwidza mitengo, kucheka kumucheto hunyanzvi uye dhizaini, uye rakanakisa basa revatengi zvese muUS nemhiri kwemakungwa.
Chikwata chedu chevashandi vane anopfuura makore gumi nematanhatu ekubatanidzwa, maoko-pane ruzivo. Isu tinoita kuti ruzivo urwu rukushande iwe nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo wakanakisa nebasa rinobvumidza vatengi vedu kumira kubva mumakwikwi.
Isu tinogadzirisa zvese zvinoenderana necheni yekutengesa (chigadzirwa kuvandudzwa, dhizaini, kutsvaga, kugadzirwa, kudzora mhando, kuyedza, kupinza kunze kwenyika, kubvumidzwa kwetsika, kuchengetera uye kuendesa.)
Tinopa maitiro akazara:
Kudzora kwemhando yepamusoro
A kusvika kuZ kuvimbiswa kwemhando yepamusoro
Kupa zvemhando yepamusoro, hunyanzvi, hwakasungwa knitwear assortment yekuwedzera kutengesa uye margins. Isu tiri vekutanga mune bhizinesi neruzivo rwakakura asi rwakanatswa uye kuzvipira kwedu
vadyidzani mune anopinza uye Chain zvitoro indasitiri.